openELEC: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụlọ ọrụ mgbasa ozi a | Akụrụngwa n'efu
OpenELEC bụ otu n'ime nkesa GNU / Linux kacha mara amara na-elekwasị anya na itinye usoro mgbasa ozi zuru oke. Emepụtara ya nke ọma maka HTPCs (Thelọ ihe nkiri nke ụlọ kọmputa nkeonwe), ya bụ, maka miniPCs eji eme ihe nkiri ntụrụndụ ọtụtụ n'ime ụlọ gị.
Ọzọkwa, OpenELEC, dị ka sistemụ ndị ọzọ yiri ya, nwekwara ike itinye ya na SD maka SBC dịka Ntu Piinwe ọnụ ala mgbasa ozi dị ọnụ ala yana ihe niile ịchọrọ na TV n'ime ime ụlọ gị ... Yabụ ọ bụrụ na ị maghị maka ya, ugbu a ị nwere ike itinye OpenELEC na ndepụta nke Sistemụ arụmọrụ maka Pi.
1 Gini bu ebe oru nkpuchi?
2 Banyere OpenELEC
3 Wụnye na Pipe Pi
Gini bu ebe oru nkpuchi?
Un multimedia center, ma ọ bụ mgbasa ozi-center, bụ isi ihe mmejuputa iwu nke ị nwere ike ịnụ ụtọ ọdịnaya niile nke ọdịnaya ọ bụla. Nke ahụ pụtara ịkpọ egwu, ihe nkiri sịnịma, igosipụta onyogho sitere na veranda, ịnweta Internetntanetị, ọbụnakwa jiri ọrụ ndị ọzọ site na ndọtị na tinye-ons (TV channel, radio,…).
Ndị a multimedia emmepe bụ ihu ọma sistemụ arụmọrụ zuru ezu na ngwanrọ iji nwee ike ịrụ ọrụ ndị a niile, na mgbakwunye na ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa na codecs.
Microsoft Windows Media Center Ọ bụ otu n'ime usoro izizi nke ụdị a ka ọ bụrụ nke ewu ewu, agbanyeghị na anabatabeghị ya n'oge ahụ, ọ ga-atọ ntọala maka sistemụ ndị dị ugbu a, ọkachasị mmejuputa ndị dị taa na consoles vidiyo, yana ọrụ nke ogo nke Kodi, LibreELEC, OSMC, ma ọ bụ OpenELEC n'onwe ya ...
OpenELEC bụ ihe eji arụ ọrụ na ntanetị maka ihe ntanetị. Ebumnuche ya na-abịa site na Emlọ Ọrụ Ntụrụndụ Linux mepere emepe. Na mgbakwunye, obere distro a na-agbaso ụkpụrụ JeOS (Just Enough Operating System) ụkpụrụ, ya bụ, sistemụ arụmọrụ pere mpe nwere naanị ihe ziri ezi ma dịkwa mkpa maka ebum n'uche ya.
Uzo a adighi adabere na ozo, ma obu ihe sitere na isi ya na ndi ama ama Ike Kodi, ihe a na-ahụkarị ọtụtụ nyiwe ndị ọzọ dịka OpenELEC. Ma ọ bụghị maka nke ahụ dị ala karịa ndị ọzọ, n'ezie, enyere ya maka uru ya ...
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe i nwere ike ime OpenLEC, eziokwu bụ na ọrụ ndị a na-apụta:
Nwere a ọkpụkpọ vidiyo na onye nhazi maka mmeputakwa na fim ị nwere na mgbasa ozi ị nwere ike ịnweta. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere ịhọrọ ndepụta okwu, gosipụta ozi vidiyo, ma mee ntọala ndị ọzọ dị mkpa.
O nwekwara a njikwa maka TV, ka i wee nwee ike idobe usoro kachasị amasị gị mgbe niile, lee nkọwa ha, ụdị, ndị na-eme ihe nkiri, na ozi ndị ọzọ a na-enweta n'ịntanetị.
Image nchọgharị jikọtara ya na iji hụ onyonyo ndị ị debere ma depụta ha n'ọbá akwụkwọ ka ịchọrọ. Ọ nwere ọrụ iji lelee otu n'otu, maka ọnọdụ mmịfe, mbugharị, ntụgharị, wdg.
N'ezie kwetara kpọọ ọdịyo faịlụ, na ndị njikwa maka egwu kachasị amasị gị, akwụkwọ ọdịyo, wdg. Enwere ike ịdepụta ha site na ọba, omenka, wdg.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ọ nwere ike igosi TV chanel na-edekọkwa vidiyo iji chekwaa ihe ngosi kachasị amasị gị ma lelee ha oge ọ bụla ịchọrọ.
ọzọ: OpenELEC nwekwara usoro dị elu iji gbasaa ikike ya site na ịwụnye mgbakwunye. Na ha ị nwere ike itinye ọwa, ọrụ akpaaka ụlọ, ngwaọrụ maka ọtụtụ ọrụ, skins ọhụrụ ma ọ bụ gburugburu, wdg.
Ozi ndị ọzọ - OpenELEC Weebụsaịtị Weebụ
Wụnye na Pipe Pi
Ọ bụrụ na ịchọrọ wụnye OpenELEC na Raspberry Pi (na ngwaọrụ ndị ọzọ), usoro ime ya dị mfe. Naanị ị ga-agbaso usoro ole na ole dị mfe:
mbụ ị budata onyonyo a ịwụnye OpenELEC. Ikwesiri ime ya site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, na ebe nbudata.
Ozugbo ị nwere ike ịhọrọ n'etiti faịlụ .tar nwere mmelite iji si n'otu ụdị gaa na nke ọzọ ma ọ bụrụ na i nweela OpenELEC, ma ọ bụ faịlụ .img ndị bụ ihe oyiyi zuru ezu iji wụnye ya na nke mbụ. Họrọ ikpo okwu ịchọrọ ibudata onyonyo maka, dịka Raspberry Pi, Freescale i.MX or Generic (maka x86-64 PC), wee budata ya .img.tar si ọhụrụ anụ version. Iji mee nke a, dị nnọọ pịa bọtịnụ Disk Image na-egosi ma chere ka ọ wuchaa.
Ugbu a, site na kọmputa ahụ ibudatara ya, ị ga - eme ya meputa usoro Mmemme nrụnye OpenELEC, dịka osisi USB, ma ọ bụ kaadị SD, nke opekata mpe 256MB ma ọ bụ karịa. Iji mee nke a, ị nwere ike iji mmemme ahụ Etcher.
Ozugbo ị kpaliri kaadị SD, ịnwere ike itinye ya n'ime oghere nke rasberi Pi ma rụọ akpa buut. N'ime ya, ọ ga - ajụ gị ka ị hazie ụfọdụ mpaghara dịka asụsụ, oge, wdg. Ozugbo ịmechara ọkachamara ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịnụ ụtọ OpenELEC zuru ezu.
Cheta na ọ bụrụ na ị ga-etinye ya na PC, ị ga-ahọrọ nhọrọ na ngalaba buut na BIOS / UEFI iji bufee site na ọkara ị mepụtara, na nke a USB ...
I nwere ike ịnụ ụtọ ya ugbu a nke ọdịnaya niile nke multimedia ịchọrọ na OpenELEC ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » openELEC: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụlọ ọrụ mgbasa ozi a
VU mita: kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi eji ngwaọrụ a